DOWNLOAD Pilatus သည် PC-7 V2.0 FSX - Rikoooo
အရွယ် 26.79 ကို MB
downloads ရယူရန္ 16 809
တိ Piglet Conrad - Piglets ထူးခြားသောလေယာဉ်
လေယာဉ်ပုံစံသည်လက်တွေ့ကျပြီး virtual cockpit သည်ပြီးပြည့်စုံ။ အလွန်ကောင်းမွန်သည် add-on. Includes eight repaints and two models: : Swiss Air Force, Botswana Defence Force, Alaska State Forestry (possibility to drop tanks), Austrian Air Force, Abu Dhabi Air Force (UAE), U.S. Civil Register (Benpuppy Tribute), Uruguay Air Force, Bare Metal.
အဆိုပါ Pilatus PC-7 Turbo သင်တန်းပေးဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၏ Pilatus လေယာဉ်ကထုတ်လုပ်မယ့်အနိမ့်တောင်ပံယှဉ်ဖောက်မ-ထိုင်ခုံလေ့ကျင့်ရေးလေယာဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါလေယာဉ်တင် aerobatics, တူရိယာ, နည်းဗျူဟာနှင့်ညဉ့်ပျံအပါအဝင်အားလုံးအခြေခံပညာလေ့ကျင့်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာနိုင်စွမ်းဖြစ်ပါတယ်။ 1978 မှ 500 အနီးကပ်အတွက်လေယာဉ်ရဲ့နိဒါန်းကတည်းကဝန်ဆောင်မှုအတွက်နေဆဲအများစုနှင့်အတူရောင်းချခဲ့ကြ - ဒါဟာသူတို့ရဲ့ ab initio သင်တန်းဆရာအဖြစ်ထက်ပိုမိုနှစ်ဆယ်လေကြောင်းတပ်ဖွဲ့များကရှေးခယျြခဲ့သညျ။
သန်းတယောက်ကျော်နာရီကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကို PC-7s အားဖြင့်ပျံသန်းခဲ့ကြပြီ။